लोपोन्मुख भाइहरु - Fitkauli
डाइनोसर जस्तो अजङ्गको जीव त लोप भयो भने जाबो मुला जस्तो मान्छे कसो लोप नहोला ।
हराउनु, नासिनु, भासिनु, खिइनु, सिद्धिँदै जानुलाई लोप भनिन्छ । लोप शब्दमा उन्मुख प्रत्यय लागेर लोपोन्मुख शब्द बनेको हो । संसारमा हरेक कुरा लोप हुने गर्छन् । भुँडीदेखि लिएर बुढी पनि लोप हुने हो कि भन्ने पिरलोले मान्छे मडारिरहेको हुन्छ । यमानका बडेमानका ज्यान भएका पनि लोप हुन्छन् र साना सुसुपाल चरिपेटे तरुनी तन्नेरी पनि लोप हुन्छन् । सिर्जना हुनु लोप हुनु प्राकृतिक नियम हो । उदय हुनु अस्त हुनु समयको कुरा हो । मान्छे मात्तियो छाडा भयो भने प्रकृतिलाई नष्ट गर्ने कष्ट गर्छ । प्राणी उत्पत्ति मार्गमा अवरोधक निरोधक बनेर आफ्नो बाहुबल प्रयोग गर्छ । तथापि प्रकृतिले चाह्यो भने डाइनोसर जस्तो अजङ्गको जीव त लोप भयो भने जाबो मुला जस्तो मान्छे कसो लोप नहोला ।
यति बुद्धिमानी ज्ञानी हार्न नजान्ने यो ग्रह र त्यो ग्रह चहार्न रुचाउने भाग्यमानी मान्छे कसरी लोप हुन्छ ? भन्ने घमण्ड वैज्ञानिकहरुमा होला तर जबसम्म मानवबाट मानवको सृष्टि, उत्पादन र उत्पत्तिमा उदासिन र आलस्यले जरा गाड्छ तबसम्म मानव वृद्धि विकासको सम्भावना तुहेर जान्छ । अभाव या आलस्यले नै हुनुपर्छ मान्छेको मानव उत्पतिखातिर मान्छेमा नै लगानी नगर्दा मानव लोप हुने सम्भावना बढेर गइरहेको छ । यस किसिमको पानी मरुवापनको संकेत करिब एक दशक अगाडिदेखि शुरु भइसकेको आभास मिलिरहेको छ । आफ्नै कुशाग्र विवेकको दासताको कारणले नै मान्छेले मान्छे नासिरहेको मासिरहेको छ ।
छातीमा हात राखेर सोचौँ, बुझौँ र गमौँ मान्छे लोप हुने छाँटकाँट समाजले देखाइ सकेको छ । गर्वका साथ गर्भधारण गरेकाहरु नै मेल फिमेलको रन्कोमा गर्भ तुहाएर ङिच्च दाँत देखाउँदै सन्तानको शिर निमोठी रहेका छन् । पुर्खाको पाइला मेटिरहेका छन् । हिम्मत हारेर एउटा या दुइटा मात्र सन्तान डोहोर्‍याएर सुखी शालिन परिवारको स्वाङ गर्दै घाम अस्त मदिरामा मस्त, चोकमा रल्लिने र हल्लिने हल्लनदासहरू नै मानव लोपोन्मुख अवस्थाका पृष्ठपोषक हुन् । आलस खाँदै आलस्यले मुन्टो बटार्दै दुईमात्र सन्तान ईश्वरको वरदान भावी पुस्तालाई घोकाइ रहेका छन् । निसन्तान रहन रुचाउने पनि यसै पृथ्वीमा छाँद हालेर बाँचिरहेका छन् । यसै तामसी सोचाइको कारणले गर्दा नै मानवले मान्छेको श्रीवृद्धि विपरित अप्ठ्यारो नमानी अधोगति समाइरहेका छन् । अधोगतिमै रमाइरहेका छन् ।
उत्तरआधुनिक उत्पादन चलनचल्तीको सरोगेस बेबीलाई अल्छी र कायर मानवको कारखाना नै मान्न सकिन्छ । भाडाको कोखले सन्तानको सोख त पुरा होला तर परम्परा संस्कार संस्कृतिमा छाडापन भित्रिन्छ र कोरोना भाइरसले झैं उपचार गर्नै नपाई क्षणभरमै सखाप र सोत्तर पार्छ । अनेकथरि विकृति र विसंगतिको भेउ पनि नपाउने मानव कसरी बुद्धिमानी र विवेकी बन्न सक्यो ? छाडाले एकदिन दुनिया छक्क पर्ने गरी चोकमा घुँडा टेकेर सार्वजनिक रूपमा आत्मसमर्पण अवश्य गर्छ । उद्देश्य प्रष्ट छ त्यो के भने भ्रुणर् उत्पादन गरेर दिसा, पिसाब, थाङ्ना, र्‍याल, खकारमा डुब्नु भन्दा निसन्तान या सीमित सन्तानले नै मानव जुनी सुखी निरोगी र दीर्घजीविको लघुताभासले मान्छेमा मानवता मरिरहेको छ । मान्छेकै कारण मानव अस्तित्वको संकट दैनिकजसो नजिकिरहेको छ । निसङ्कोच मान्छेले मान्छेको खिल्ली उडाइरहेको छ । मानव गतिविधिले जुन बाटो समाइरहेको छ त्यसलाई हीनताबोध र मानव विवेकले हार खाएको संकेतको रूपमा स्विकार्न कर लाग्छ ।
हाम्रा बाजे बराजुका पालामा सन्तान श्रीवृद्धि हेतु जन्मिएर तीनपाते नभई “यो मेरो है” भन्दै अग्रिम बुकिङ बैना गरेर राख्थे । सन्तानप्रतिको चिन्तन चिताइ नसक्नु थियो र पो सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकिन्थ्यो । भन्नेले पनि भन्ने गर्थे “जसको सन्तान उसको धन जसको भैसी उसको वन” । त्यसैको तिर्सनाले गर्दा नै एउटी कन्या बाँझी भए अर्की ल्याउने । त्यसले पनि नभए तेस्री, चौथी, सातौ, दशौ, एघारौ मुसाले मंसिरमा दुलही भित्र्याएझै सकेको सिहारेर सबै मातृभूमिलाई जिल्याउँदै केलाउँदै खेलाउँदै जसरी तसरी जर्जर हुन नदिई उर्वर बनाउन जोस र जाँगर लगानी गर्थे । त्यस किसिमको जोस सोच जाँगरको अनिकालको असर अहिलेका जेठा जेठी, माइला माइली, साइला साइली, काइला काइली, ठाइला ठाइली, अन्तरे, जन्तरे, लखन्तरे, ठूलोकान्छो र कान्छोमा परिरहेको छ । खै ति भाइ बहिनीहरु कसका कारणले लोप भए ? कसले छानबिन र अन्वेषण गर्ने ? कसले हुटहुटी र प्रेरणा दिने ? न सरकारलाई फुर्सद छ न युवा जमातलाई । पालन पोषण सिहार सम्भार गर्ने झन्झट, महँगी र आधुनिकता र आलस्यताले गर्दा भाइबहिनीहरु फैलिने भन्दा वैलिनेक्रमले जितिरहेको छ । सन्तानको सङ्कट विश्वव्यापी रूपमा नजिकीरहेको छ । यसमा जनता सरकार र विश्व नै दोषी छ । सबै आधुनिकताको नाममा मैमत्तु, उन्मत्त र उन्मुक्त छन् । यसो गर त्यसो गर यो राम्रो त्यो नराम्रो कसले अराउने कसले सिकाउने ? त्यसैले होला गायक रामकृष्ण ढकालले गीतै गाए- “ओराली लागेको हरिणको चाल भो । बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो । छल गर्‍यो मायाले ।”
शिवशक्ति मार्ग, फूलबारी-११, पोखरा, कास्की
फोन नं. ९८०६६७७५९४
शेषराज भट्टराई प्रकाशित मिति : पुस ११, २०७८
‘साहित्यमा दृष्टिकोण’ विषयक गोष्ठीसहित ४२३ औँ सन्ध्या
के गर्नु !
शेषराज भट्टराई का थप सामाग्रीहरु
उत्तरआधुनिक चकचके बच्चो बिक्रीमा
डा. खगेन्द्र लुइटेल
नेता र बाबा उस्तै...